कोपे बनाम घटाउन योग्य: के फरक छ? - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कल्याण चेकआउट औषधि बनाम मित्र कम्पनी, समाचार समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, औषधि जानकारी भारी खेल औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, चेकआउट समुदाय, कम्पनी औषधि जानकारी खेलहरु
मुख्य >> कम्पनी >> कपि बनाम कटौतीयोग्य बीच के भिन्नता छ?
कपि बनाम कटौतीयोग्य बीच के भिन्नता छ?
कहिलेकाँही स्वास्थ्यसेवा सर्तहरू पूर्ण फरक भाषा जस्तो देखिन सक्छ। जस्तै शब्दहरूको साथ copyay , घटाउन योग्य , र अधिकतम बाहिरको जेब वरपर फ्याँकिएको, तपाइँलाई के हो भनेर कसरी थाहा पाउनुपर्दछ? त्यहि ठाउँमा हाम्रो हेल्थकेयर परिभाषित श्रृंखला आउँछ। हामीले सर्तहरू तोड्छौं ताकि तपाईं बुझ्नुहुनेछ - र समझदारीसहित, उत्तम बचत आउँछ।
स्वास्थ्य सेवा योजना छनौट गर्दै? मासिक लागत, वा प्रीमियमको थपमा, यो बुझ्न गाह्रो छ कि तपाईं अरू के आर्थिक रूपमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ। एक कपाई र कटौती योग्य मद्दतले तपाईं जेबबाट कति तिर्नुहुनेछ भनेर निर्धारण गर्दछ; यी लागतहरू एक विशेष योजना तपाईंको बजेट को लागि आर्थिक रूप मा सम्भाव्य कसरी मा ठूलो असर पार्न सक्छ। एक copyay बनाम घटाउन योग्यको बीचको भिन्नता अहिलेसम्म थाहा छैन? हामीले तपाईंलाई कभर गर्यौं।
कागज र कटौतीयोग्य दुबै प्रकारको लागत साझेदारी हो - तपाईले आफ्नो कुल स्वास्थ्य सेवाको लागतहरूको भुक्तानी गर्नु हुनेछ, र तपाईको बीमा कम्पनीले प्रायः जसमा बिल गरिएको छ र तपाईले तिर्नु पर्ने बिभिन्न अन्तरलाई ढाक्छ।
TO copyay विशेष हेरचाहको लागि शुल्कको तपाईंको अंश हो, यो चिकित्सकको भ्रमण वा प्रिस्क्रिप्शन हो। यो सामान्यतया एक प्रबन्धन योग्य रकम हो र तपाईको बीमा कार्डको पछाडि हिज्जे शब्द पनि सकिन्छ, जस्तै डाक्टरको भ्रमणका लागि २० डलर वा प्रिस्क्रिप्शन रिफिलको लागि १० डलर। सामान्यतया, मासिक प्रिमियम जति उच्च हुन्छ, वा तपाईंले आफ्नो योजनाको लागि भुक्तानी गर्नुहुन्छ, रकम कम हुन्छ। निवारक हेरचाहको लागि, जस्तै मेमोग्राम वा एक वार्षिक शारीरिक रूपमा, तपाइँसँग कुनै पनि कपि नहुन सक्छ। तपाईको बीमा योजनाको नेटवर्कमा प्राथमिक हेरचाह र बनाम विशेष हेरचाह, र ब्रान्ड नाम बनाम जेनेरिक औषधिहरूका लागि प्रतिलिपिहरू फरक फरक हुन्छ।
तपाइँको उपवास रक्त शर्करा के हुनुपर्छ
घटाउन योग्य के हो?
Deductibles अर्कोतर्फ, तपाईको बीमा कम्पनीको कभरेज सुरु हुनुभन्दा अघि जेबबाट भुक्तान गर्न तपाई जिम्मेदार हुनुहुन्छ।
एक पटक तपाईंको वार्षिक कटौती योग्य पूरा भयो, तपाईंको बीमा कम्पनी हुनु पर्छ तपाइँको कभर खर्चको अधिकांश कभर गर्न सुरू गर्नुहोस्, तर डरलाग्दो लागत सिक्सीरेन्स वा सम्बन्धित कभरेज खाली अझै पप अप हुन सक्छ (त्यस पछि थप)।
प्रतिलिपिहरू जस्ता, तपाईंको मासिक प्रिमियमहरू जति उच्च हुन्छ, कम तपाईंको कटौती योग्य हुन्छ, किनकि तपाईंले आफ्नो बीमा कम्पनीको अगाडि बढि पैसा तिर्नुहुन्छ। जब एक स्वास्थ्य सेवा योजना छनौट गर्नु हुन्छ, यो ध्यान राख्नु महत्वपूर्ण छ कि तपाईले कति शेलको अपेक्षा गर्नु हुन्छ - तपाईको मासिक लागतहरु बाहेक - तपाईको बीमाले बाँकी ट्याब लिनु अघि।
न्यु मेक्सिकोको यु.एस. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा भारतीय अस्पतालका परिवार चिकित्सक एमडी, रचेल ट्राइपेट भन्छिन्, धेरै मानिसहरुलाई उनीहरूको कटौती योग्य के हो भन्ने बारे केही थाहा छैन। त्यो समय होइन जब तपाईं यो पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ कि तपाईं घटाउन योग्य छैन तपाईं असक्षम गर्न सक्नुहुन्छ।
शल्यक्रिया पछि कब्जियत संग कसरी व्यवहार गर्ने
कसरी कागयहरू र घटाउन योग्यहरू सँगै काम गर्दछ?
सिद्धान्तमा सरल देखिन्छ, तर यसले कसरी वास्तविक जीवनमा काम गर्दछ? यसलाई भत्काऔं
प्रत्येक महिना, तपाईले मासिक प्रीमियम तिर्नुहुन्छ; यो स्वास्थ्य स्वास्थ्य बीमा गर्न को लागी शुल्क हो। यदि तपाईंले आफ्नो नियोक्ता मार्फत स्वास्थ्य बीमा प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईंको प्रीमियमको एक अंश तपाईंको पेचेकबाट बाहिर आउन सक्छ।
अब वर्षको अवधिमा भन्न गरौं, तपाईले आफ्नो खुट्टा टेक्ने काम समाप्त गर्नुभयो। तपाईंसँग आपतकालीन कोठाको भ्रमण छ, विभिन्न प्रकारका डाक्टरहरूको केहि ट्रिपहरूको साथ, तपाईंको खुट्टामा फिर्ता जानको लागि।
यो जहाँ तपाइँको कटौती महत्वपूर्ण हुन्छ। तपाईंले आफ्नो वार्षिक कटौतीयोग्य हिट गर्न आवश्यक पर्दछ — राशि जुन तपाईंले कुनै मेडिकल सेवाहरूको लागि जेबबाट भुक्तान गर्नुभयो। छैन प्रतिलिपिहरू - तपाईंको बीमा प्रदायकले तपाईंको मेडिकल बिलको उच्च प्रतिशत तिर्न सुरु गर्नु अघि।
सिंगुलैयरलाई काम गर्न कति समय लाग्छ?
तर प्राय जसो बीमा योजनाहरूमा, तपाईको कटौतीयोग्यमा पुग्नु भनेको यसको मतलब यो होइन कि तपाई कुनै कुरा भुक्तान नगरेको स्पष्ट अवस्थामा हुनुहुन्छ। यसको सट्टामा तपाईसँग हुन सक्छ सिक्सीरेन्स शुल्क यो तपाईंको स्वास्थ्यसेवा लागतहरूको प्रतिशत हो जुन तपाईंले योगदान गर्न आवश्यक छ, जबसम्म तपाईं आफ्नो बीमाकर्ताको वार्षिक आउट-अफ-पकेटमा पुग्नुहुन्न। त्यो हो कुल प्रतिलिपि सहित (तर तपाईको मासिक प्रीमियम समावेश नगरी) सहित तपाईको सबै मेडिकल लागतहरूको लागि तपाईले वर्षभर भुक्तान गर्नुभयो।
यो केवल एक पटक तपाईं अधिकतममा पुग्नुहुन्छ कि तपाईंको बीमा कम्पनीले तपाईंको कभर गरिएको मेडिकल लागतको १००% तिर्नु पर्छ। क्यालेन्डरमा पनि नजर राख्नुहोस्; नीतिहरू सामान्यतया एक बर्ष लामो हुन्छ, त्यसैले तपाइँको कटौती योग्य उत्तरदायित्वहरू तपाइँको वार्षिक बीमा वार्षिकोत्त्व वा जनवरी १ मा रिसेट हुनेछ। यदि तपाइँको कटौती योग्य प्रत्येक पात्रो वर्ष पुनः सेट हुन्छ।
संक्षेपमा, कटौती योग्य तपाईको बीमाले तपाईको स्वास्थ्य लागतको लागि केही भुक्तान गर्न सुरु गर्नु अघि भुक्तानी गर्नु पर्दछ। प्रतिलिपिहरू अलग, निश्चित शुल्कहरू हुन्छन् जुन सामान्यतया तपाईंको कटौतीयोग्यमा गणना हुँदैन जुन तपाईं डाक्टरलाई भेट्दा वा प्रिस्क्रिप्शन भर्दा तपाईंले तिर्नु पर्ने हुन सक्छ। एकचोटि तपाईंले आफ्नो कटौतीयोग्य भेट्नुभयो भने, तपाईंले आफ्नो हेरचाहको लागि कम भुक्तानी गर्नुभयो, तर अझै सिक्सीन्सको लागि जिम्मेवार हुन सक्नुहुन्छ, जबसम्म तपाईं वर्षको लागि आफ्नो वार्षिक आउट-अफ-पकेटमा पुग्नुहुन्न।
Co Co Assistance vs. Copay vs. Ducuctible: कसरी अतिरिक्त शुल्क बाट बच्ने
अप्रत्याशित बीमा शुल्कहरू बेवास्ता गर्न उत्तम तरिका मध्ये एक तपाईंको योजनाको नेटवर्क भित्र चिकित्सकहरू र अस्पतालहरूमा टाँसिरहनु हो। तपाईंको बीमा यी प्रदायकहरूको लागि कम मूल्यमा कुराकानी गर्‍यो, जुन सामान्यतया कम बिलहरूमा अनुवाद गर्दछ र तपाईंको लागि बाहिरको जेब खर्च।
अर्को प्रयोग गरेर हो एकलकेयर प्रिस्क्रिप्शन छुट कार्ड तपाईंको सल्लाहको लागि। केवल तपाईंको औषधीहरूको खोजी गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कति बचत गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको प्रिस्क्रिप्शन कोपे बिना योजना छ भने यसले वास्तवमै मद्दत पुर्‍याउँछ, तर कहिलेकाँही हाम्रो मूल्यले कपि मूल्यलाई पनि हराउन सक्छ।
एलर्जी Rx 101: तपाइँको मौसमी एलर्जी औषधि प्रश्नहरूको उत्तर
बीमा संग accutane लागत कति हुन्छ?
सस्तो मधुमेह परीक्षण स्ट्रिप्स के हो?
स्वास्थ्य बीमा कटौती योग्य बनाम पकेट बाहिर अधिकतम
कसरी एक uti छिटो खाली गर्न को लागी
स्याउ साइडर सिरका toenail कवक उपचार गर्न सक्नुहुन्छ